SHEEKOOYIN - Somalia Focus
Category Archives: SHEEKOOYIN
Doolli ma taqaanaa? Ama Jiir dheh xitaa. Haa Doolligaas ayaa beri hore oo hore cid gurigooda soo galay. Ciddu waxa ay ahayd mid aan weligeed bani aadam iyo geel mooyee nafle kale arag. Markii uu bahalkan yar guriga u soo dhacay, qof kasta oo qoyska ka mid ah halkiisa ayuu isku tuuray (seexday), si uu mayd isaga dhigo. Adiga oo qolkaaga ku jira haddii aad maqasho dhaq-dhaqaaqa...
Hadii ninka isaaqa ah uu aaminsanyahay xuduuda gumeysigu dhigay inuu dowlada ku noqonaa.Hadii kan majerrteen uu aaminsanyahay in puntland mooyee aan wadan kale jirin.Hadii kan hawiye calamo cusub oo bareejo ah uu meelaha wato.Hadii digil iyo mirifle shariif xasan mooyee aysan siyaasi kale aqoon. Hadii ogaadeen iyo mareexaan jubaland ninba gooni u sheegtay. Soomaali galbeed...
Dhiigaygu Caana Maaha! Waxaan barta aalada facebook ku aqbalay wiil Soomaaliyeed oo ii soo dirsaday codsi. Markaan accountkiisa fiiriyay hay-ad ayuu u shaqeeyaa oo ajnabi ah. Wuxuu u dhoofaa gobolada dalka. Marka uu magaalo safar ku tago ee uu soo galiyo like ayaan u saaraa. Wax hadala iyo sheeko midna nama ay dhax marin shaqsiyan oo an ahayn like-taas uun. Waxaan maalmahaan...
1- Haduu qof ku dhaho ”Gaaska badan igadaa” wuxuu ka wadaa ”Faanka badan igadaa”. 2- Haduu qof Yurub degan uu ku dhaho ”Bishaan Amisom ma aanan qaadan” waxa uu kawadaa ”Bishaan Ceyr ma aanan qaadan”, Waad fahmi kartaa Amisom waa ciidamo Ajaanib ah oo Dalkeena ceyr ka qaadata howl la’aan. 3- Qof haduu ku dhaho ”Haye...
dhaqanka soomaliyeed waxaa ku soo badanaayo dhaqan doorin laga soo min guuriyay waxa loogu yeero reer galbeedka. soomaliya waxaad ku arkeysaa dumar leh waxaan qabaneynaa oo caruurtoodi soo dayacaya iyo kuwa guurkaba ka caajisay inteey ku jireen hardankaan la isku lifaaqayo waxa uu alle u abuuray ragg iyo dumar, qaar badan oo ka mid ah dumarka qurbaha ka yimid waxaa ka...
1- Siyaasi Calooshiisa siyaasi u ah sida Sharaf Xasan.2- Siyaasi Qabiileed sida Cabdiwali Gaas.3- Siyaasi Shisheeye siyaasi u ah sida Axmed Madoobe.4- Siyaasi aananba Siyaasad aqoon sida Cabdikariim Galmudug. 5- Siyaasi intaas kore dhan wada ah, sida Xasan Sheekh. 6- iyo ugu danbeyn Siyaasi wadani ah, dadnimana leh laakiin aanan Jaanis loo ogoleyn sida kuwa badan oo aad...
Ninbaa beri waxaa lagu yiri hebeloow naagtaadu maaha fariidoo, xoolaha waa dayacdaa arigana maalinkasta dawacaa neef ka qaata, waagi hore nin naagtaadu waa xuntahay la yiraa uma dhineeyne ninki durba waxaa uu ku dhaqaaqay siduu arintaas u ogaan lahaa bal in naagtiisu sida laga sheegayo tahay iyo in kale, gabadhu meel kale ma La,eyne kaliya waxay ahayd mid fadhiga iyo haasawaha...
Dowladii loo han weynaa Somaaliyeed maalinba maalinta ka danbayso waxay kusoo baxdaa nooc kale . Labo ammuurood ayaa Shacabka dowlad doonka haraadkana u qabo nabada sanka laga gashaa:-!. MOOSHIN – waa Baarlamaanka caadadiisa mooshin fiican ee waxku oolka waa la laadaa sidii tii laga keenay M/weyne Xasan .Mooshinka aan waxtarka lahayn ayaa lala meeraa sidii ceesaan...
Ninbaa hada ka hor la waydiiyay, wiilkaagu horta dabaal miyaa qaabkiisa waan bixi waynaye, markaas ayuu yiri maya wiilkeygu dabaal maahan, saa la yiri haye maxow yahay, suu yiri saqsaqlana maahan, saa la yiri haye waa nuuce marka, wuxuu yiri wiilkeeygu waa sacsacle, Waxaan idin waydiiyay waaxay faqriga u dhaxeeya sedaxda eray, Dabaal Saqsaqle Iyo sacsacle, Waxaa qoray:...
Hada ka hor nin aa hurda la’aan dhibtay, kadib waxoo aaday naag dadka maskaxda daweeso, waxoona ku dhahay ” habeenkii ma seexan karo waxaan marwalbo ku soo boodaa in sariirta hoostiisa la igu jiro, kolkaan soo kacana oo aan fiiriyo cidi kuma jirto” naagtii waxay ku dhahday “waxaad ubaahantahay in lagu daweeyo waxaad timaadaa isbuucii labo jeer, marwalbana 100$...